Print Page - Neef ama Xiiq (Asthma)
Diseases and Conditions => Cudurrada Guud => Topic started by: SomaliDoc on October 19, 2007, 07:45:54 AM
Title: Neef ama Xiiq (Asthma)
Post by: SomaliDoc on October 19, 2007, 07:45:54 AM
Neef ama Asma waa cudur ay marinnada hawadu ee gala sanbabadaadu ay cadhiidhi noqdaan ayna soo saaraan xab.
Marka ay tani dhacdo, way adag tahay in aad neefsato. Waxyaabaha kicin kara neeftu in ay ku qabato waxaa ka mid ah xajiinta, hergebka, daawooyin, habaaska ama boodhka, catarka iyo baruufannada, qiiqa, kiimikooyin, jir dhis ama niyad kac.
• Neefsasho siyaado ah ama dhibaato neefsashada ka timaadda
• Xiiq ama neefsasho cod leh
• Quficid laga yaabo in ay ka sii darto habeenkii ama aroorta hore
• Feedhaha oo giigsanaan laga dareemo
• Wadna garaac
• Cune cun-cun
• Daal in aad dareento
Waxaa laga yaabaa in aad calaamado badan oo neef ama asma aad qabto haddii aad:
• Xajiin ama xasaasiyad qabto
• Aad leedahay qof qoyska ka tirsan oo neef qaba
• Aad u nugushahay wasaqowga hawada
• Aad la kulanto qiiq
• Aad diiqo qabto
Daryeelkaaga waxaa ka mid noqon kara:
• Qaadashada daawooyin kala duwan si:
? Marinnada hawadu kuugu furmaan
? Hoos ugu dhigaan jawaabta uu jidhku ka bixinayo xajiinta
? Hoos u dhigaan bararka marinnadaada hawada
? Hoos ugu dhigaan balqanka ama xabka
• Ogaanshada waxa sababa calaamadahaaga.
• Baarid xajiin.
• Isticmaalidda mitirka lagu hubiyo neefta, loogana hortago in neeftu ku qabato.
• Cabidda koob weyn oo cabitaan ah 1-2 saacadood ee kastaba.
Tani waxay kaa caawinaysaa in xabku uu khafiifo. Xab khafiif ah way kuu fududaanaysaa in aad qufacdo oo uu kaa soo go’ o wuxuuna hoos u dhigayaa bararka sanbabadaada. Cabitaannada cad ayaa ugu fiican, sida biyaha, casiirka furutada, shaaha, maraqa ama maraq cad.
• Ka fogaanshada waxyaabaha laga sameeyo caananaha marka aad xiiq leedahay maxaa yeelay waxay ballaarin karaan xabka.
Si aad uga hortagto Neef in ay ku Qabato
• Daawada neefta mar walba wado. Qaado daawooyinka kuu qorsheysnaa xataa haddii calaamaduhu kaa tagaan.
• Ka fogow cabidda sigaarka, shiishada ama qiiqa sigaarka.
• Ka dheerow cuntooyinka, daawooyinka ama waxyaabaha kuu keenaya in calaamadaha neeftu kuu yimaadaan. Kuwaan waxaa loo yaqaannaa kiciyeyaal.
• Ka fogow taabashada dadka hergebka ama ifilada qaba.
• Naso oo cab cabitaanno fara badan marka ugu horreysa ee calaamado hergeb aad isku aragto.
• Ku neefso safaleeti ama wax kale oo la isku daboolo cimilada qaboobaha.
• Takhtarkaaga kala hadal jir dhiska si aad u xoojiso sanbabadaada.
• Diiqada iska yaree.
Isla markiiba aad cusbitaalka haddii aad:
• Isku aragto qufac, xiiq ama neefsashadu kugu adag tahay.
• Dareensan tahay in aad qaadato daawooyin ka badan kuwii uu takhtarku kuu amray.
• Heerkulka jidhkaagu uu ka sarreeyo 101 darajo F ama 38 darajo oo C.
• Isku aragto xab aan caddeyn ama kala cad ama aad ugu weyn in la qufaco.
• Dhibaatooyin ay daawooyinku keeneen qabtid sida gariirid, jahawareer, isku yaacsanaan, calool kacsan ama dhadhanka oo kugu xumaada.
• Aadan awoodin in aad sameyso hawlahaaga caadiga ah ama jir dhiska.
Isla markiiba tag ama la xiriir qeybta gargaarka dagdaga haddii:
• Aad isku aragto xiiq daran, neefsashada ama qufacu kugu adkaadaan.
• Aad isku aragto laab xanuun.
• Ay faruuryaha ama ciddiyaha faruhu boor ama buluug ku noqdaan.
Xanuunka Neefta wuxuu ka mid yahay xanuunnada qofka ku raaga illaa iyo hadda lama garanayo qaab looga bogsado inkastoo ay jiraan xaalado ka caafmaada oo aan dib loogu arkay, waxaana badanaa lala xiriiriyaa jawiga oo is badalo ama qofka oo ka guuro meel uu dagganaa ama ku noolaan jiray.
Neefta waxay ku badan tahay wadamada hormaray ama caruurta ku dhalata meelaha nadiifka ah ama nadaafaddooda lagu dadaalay, sababtuna waxay cilmibaarayaashu ay sheegaan in neefta ka timaado xajiin la rabay in jirka uu la qabsado markii qofka uu yar yahay, sidaa awgeed waxyaabaha xajiinta jirka bari lahaa waa lala dagaallamadaa dunida hormartay iyadoo meel kasta lagu dhaqo ama lagu tirtiro daawooyin kiimiko ah, waxay kaloo sheegaan in wadamada wax soo saaro oo warshadaha leh in neefta ay ku badan tahay taasoo loo aanaynayo hawada wasakhaysan, sidaa awgeed waxaa jirto qaabab cusub oo aan daawo ahayn oo takhaatiirta qaar ay u adeegsadaan in lagu daaweeyo neefta.
Fadlan takhtarkaaga kala tasho neeftaada nooceeda iyo heerka ay marayso haddii aad dareento in daawooyinka aad la qabsatay ama wax ay kaa tari la'dahay.
Haddii aad xanuunkaan su'aal ka qabtid waad na waydiin kartaa.